Fikarohana momba ny firaisana Ny drafitry ny fanahy amin'ny fiainana taloha Tantaran'ny Poldi Holzmuller | Wolfgang Neurath: Tranom-paritra momba ny fanambadiana amin'ny fiovana eo amin'ny lahy sy vavy - Fikarohana momba ny vatana teraka
Ny mpikaroka: Dr. Karl Muller, Ian Stevenson, MD
Poldi Holzmuller sy ny tsy fahampian'ny toetrany ho an'ny zazalahy: ny fiainanao taloha tahaka ny lehilahy?
Poldi Holzmuller dia teraka tany 1913 tany Feldkirch, Aotrisy tamin'ny fianakaviana Katolika Romana. Ny anaran-dreniny dia i Elizabeth sy i Ernst rainy. Poldi dia zaza mangina izay nanana fialam-boly tiany indrindra tamin'ny famoahana gazety sy nanavotra azy ireo. Ny sakafo tiany indrindra dia ny tsirin-tsakafo sy ny lasopy. Amin'ny maha-zatovovavy azy dia nahaleo tena izy ary tsy liana tamin'ny tovolahy. Raha ny marina dia nilaza mihitsy aza izy fa tsy misy ifandraisany amin'ny lehilahy, toy ny hoe tsy tian'izy ireo.
Ny fikarohana nataon'i Ian Stevenson taloha dia nanondro fa ny fanahy dia miverina amin'ny vatana hafa amin'ny 90 isan-jaton'ny fotoana. Ny tsy fahampian'ny fahasarotan'i Poldi amin'ny lehilahy dia mety noho io fanahy io manana andramena mandritra ny androm-piainan'ny lahy sy ny vavy ary toy izany, fisainana lahy, izay ny fisarihana vehivavy no fanao.
Biby an'i Poldi Tantele
I Patti dia nifamatotra akaiky ny renin'i Anna Anna, izay nipetraka tany Atsimo Tyrol. Tonga nitsidika an'i Poldi sy ny fianakaviany indraindray ny nenitoita Anna. Nandritra ny fitsidihany dia tena tia be i Poldi sy ny nenitoany Anna. Izy ireo dia hamihina sy hanoroka ary manana anarana ho an'ny biby an-trano izy ireo. Poldi dia "Poldile" ary i Anna dia "Tantele," izay amin'ny teny alemana dia misy ny mari-pandrefesana, izay midika hoe nenitoa. Noho izany, ny anaran'i Anna dia mitovy amin'ny "Auntie."
Poldi dia mifanohitra amin'ny Tuberkulosis
Raha vao 19 taona i Poldi, dia nanamboatra tuberculosis pulmonary izy. Na dia Katolika Romanina aza ny Holzmullers, i Poldi sy ny reniny Elizabeth kosa dia liana amin'ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao. Ny rain'i Poldi, Ernst, dia tsy nino ny fitsanganana indray ao amin'ny vatana vaovao.
Ny drafitry ny fanahy: Milaza i Poldi fa hiverina amin'ny toerany izy amin'ny maha-ankizilahy azy
Nandritra ny taona 1933, nilentika i Poldi. Rehefa maty matetika ny tuberkule dia nanomboka nihevitra ny fahafatesany i Poldi. Nilaza tamin'ny reniny izy fa raha mbola miverina indray izy dia ho zazalahy izy ary ho teraka ao amin'io faritra io ihany, mba hahafahany miaraka amin'ny fianakaviany indray. Ankoatra izany, hoy i Poldi raha nivadika indray izy teo akaiky teo, dia hanome famantarana azy ireo izy, mba ho fantatr'ireo Holzmullers fa azy izany.
Drafitra fanahy: te-hody vatana vaovao i Poldi ary handeha ao amin'ny kalesin'i Marie Neurath
Ny Holzmuller dia nanana namana, Marie Neurath, nitsidika an'i Poldi matetika nandritra ny aretiny. Marie bevohoka tamin'ny taona 1933. Indray mandeha dia nilaza tamin'i Poldi i Marie mikasika ny fiara kely iray nividianany azy mba hijerena ny zanany vaovao. Nanontany i Poldi raha afaka miaraka amin'ny zazakely vaovao miaraka amin'i Marie izy. Hoy izy avy eo,
"Fantatrao anefa, fa ny tena tiako dia ny ho ao anaty fiarako kely." (1)
Maty tamin'ny volana 16 i Poldi volana taorian'ny nivoahany ny tuberculosis tamin'ny Janoary 13, 1934, tamin'ny taona 20.
Manambara ny nofy avy amin'ny zavaboary ara-panahy: Miseho toy ny gisandrano i Poldi
Taorian'ny fahafatesan'i Poldi, i Elizabeth, reniny, dia nanonofy fa teo an-jaridainany izy ireo no nitazana ny fitodihan'ny làlam-by teo ambonin'ny làlam-pahefana. Niteny ny iray tamin'ireo lalao:
"Mama, tsy mahita ahy ve ianao?"
Hoy i Elizabeth namaly: "Eny, fa iza moa ianao?"
Avy eo izy dia nandre an'i Poldi niteny hoe: "Tonga aho." Tamin'io fanambarana io dia nisy iray amin'ireo lozam-pifamoivoizana nanidina ny efitranon'i Marie Neurath. (2)
Reincarnation & Gender Change: Poldi Reincarnates ho Wolfgang & manatanteraka ny drafitry ny fanahy.
Marie Neurath dia nanan-janaka lahy antsoina hoe Wolfgang, izay teraka tamin'ny 3 1934, volana latsaky ny telo volana taorian'ny nahafatesan'i Poldi. Rehefa andro vitsivitsy monja i Wolfgang, dia nitsidika ny tranon'ny Neurath i Neny, renin'i Poldi, mba hijery ilay zazakely, izay nodimandry tao amin'ilay fiara vaovao nividianan'i Marie.
Nifoha i Wolfgang ary nahita an'i Elizabeth izy, naninjitra ny tanany ary nitsiky, toy ny hoe hiarahaba azy. Angamba izany no famantarana izay nampanantenain'i Poldi fa raha mbola miverina indray izy.
Fiainana taloha momba ny Tantele & Fondness ho an'ny Puff Rice & Clipping Gazety
Tamin 'ny zatovolahy, dia notandremana i Wolfgang mba hahazoana vokatra, izay nihalehibe azy. Ny sakafo tiany indrindra dia ny vary ary ny lasopy lasopy, izay tsaroantsika, no sakafo tena tian'i Poldi. Tahaka an'i Poldi koa, nahafinaritra i Wolfgang tamin'ny famoahana sary tao amin'ny gazety ary ankizy mangina izy, tahaka an'i Poldi.
Rehefa feno telo taona i Wolfgang dia tonga nitsidika ny Holzmullers voalohany i Nenitoa Anna taorian'ny fahafatesan'i Poldi. Anna dia tao amin'ny zaridainan'ny fianakaviana ary nandeha nanatona azy i Marie. Tamin'izany fotoana izany dia nivoaka avy tao amin'ny tranon'ny Neurath i Wolfgang ary nahita an'i Anna izy, nihazakazaka nihazakazaka nanatona azy izy, niezaka ny nihanika ilay fefy nanasaraka azy ary niantsoantso hoe: "Tantele, Tantele", ilay anaran-tsaka nomen'i Poldi an'i Anna. Mifanohitra amin'izany, i Wolfgang dia tsy nanononona ny fanaintainany ankehitriny tamin'ny anaran'ity biby fiompy ity; Nampiasa ny teny hoe "Tante" izy (3)
Wolfgang manontany ny fiainany taloha mba hividianany rice
Rehefa feno efa-taona i Wolfgang, dia nihazakazaka nankany Elizabeth izy tany amin'ny fivarotana fivarotana teo an-toerana. Rehefa nanomboka handeha izy, dia hoy i Wolfgang: "Andraso aho mandra-pahavitako ny fivarotako. Dia hiverina aminao indray aho. Miara-miangona izahay, ankehitriny. "(4)
Nandao an'i Elizabeth tany an-tranony i Wolfgang, nandalo ny tokantranon'i Neurath teny an-dalana. Hoy izy avy eo, "Tsy maintsy miverina any an-trano aho. Fantatrao fa miaina ankehitriny aho. "(5)
Tao amin'ny fivarotana iray hafa tao amin'ny fivarotana entana ihany, nihaona tamin'i Elizabeth, renin'i Poldi, i Wolfgang sy Marie reniny. Hoy i Wolfgang tamin'i Elizabeta: "Mama, azafady mba mividy vary ho ahy. Tsy hividy ahy ny reniko any. "(6)
Amin'ity fanambarana ity, raha toa ka nangataka an'i Elizabeth, reniny, i Elizabeth, mba hividy ny sakafo tiany indrindra, ny vary vary, izay tsy natao tao an-tranon'ny fianakaviany vaovao.
Wolfgang mahafantatra ny lalany manodidina ny fiainany taloha
Rehefa feno 12 taona i Wolfgang, dia nihazakazaka tamin'i Ernst Holzmuller, vadin'i Elizabeth ary rain'i Poldi izy. Niangavy an'i Wolfgang i Ernst mba hiverina any amin'ny tranon'ny Holzmuller mba hahazoana zavatra izay nila izany tao amin'ny toeram-ponenana. Nifindra tany amin'ny tranon'ny Holzmuller sy teo am-baravarana i Wolfgang, dia nanolo-tena i Elizabeth mba hamoaka ilay lahatsoratra ilaina.
Namaly i Wolfgang hoe: "Efa fantatro ny misy azy. Fantatro tsara ity trano ity. "(7) Raha ny tena marina, mbola tsy tany amin'ny rihana faharoa tao amin'ny tranon'ny Holzmuller mihitsy i Wolfgang, ary tsy tao amin'ny trano fonenany izy. Ian Stevenson dia nanamarika fa ao amin'ny gorodona faharoa, misy 6 saika varavarana mitovitovy amin'ny lalamby midadasika. Tsy nisy fomba hahafantarana amin'ny alalan'ny fijerena ireo varavarana izay nentina tany amin'ny gara.
Na izany aza, dia nitarika ny dian-tongotra nankany amin'ny rihana faharoa i Wolfgang, dia nisintona ny varavarana marina ho an'ny toeram-pivarotana ary nihodinkodina tamin'ilay lahatsoratra nilain'i Ernst.
Izany dia mampahatsiahy ny fomba ao amin'ny Anne Frank | Barbro Karlen raharaha momba ny vatana vaovao, Fantatr'i Barbro ny toerana tokony ho hita teo amin'ny rindrina ny sary tamin'ny fitsidihany voalohany tao amin'ny Anne Frank House.
Fanekena an'i Wolfgang ho fampisehoana indray ny Poldi
Elizabeth sy Ernst Hollzmuller dia samy nino fa i Poldi dia teraka indray tao amin'ny Wolfgang, noho ny nofinofy nambara, ny faneken'i Wolfgang an'i Tantele Anna, ny fihetsika mahazatra amin'ny fametahana sary avy amin'ny gazety, ny fahalalany ny trano sy ny tafo ao amin'ny Hollzmuller, ary ny fitiavany ny lasopy paty sy ny vary mivonto. Mariho fa ny fianakaviana Neurath dia tsy nihinana vary nifofofofo, porofon'izany i Wolfgang voatery nitalaho tamin'i Elizabeth mba hividy azy ho azy.
Ny Hollzmuller ihany koa dia nanamarika fa i Poldi, talohan'ny nahafatesany, dia nilaza tamin'i Marie Neurath fa te-ho ilay zazakely izay hihazona ny fiarabe zaza vaovao izy. Tahaka ny hoe tanteraka ny fanirian'i Poldi.
Ity tranga ity dia mampiseho ireo endri-javatra manaraka:
Ny trangam-pandrosoana niorenan'ny manodidina ary ny fametrahana ny fiainana hoavy: Na dia tsy niorina tamin'ny fanambadiana ara-biolojika iray aza i Poldi, dia niorina indray tamin'ny fianakaviana akaikin'ny varavarana izy, mba ho akaikin'ny Hollzmullers sy ny nenitoan'i Anne. Miantso ity tranga ity ho toy ny trangan'ny vatana vaovao aho.
Amin'io tranga io, toy ny amin'ny tranga rehetra momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana, ny fanahy iray dia nanao drafitra an-kitsim-po ho amin'ny fahatongavana ho nofo. Raha niandry ny fahafatesany avy amin'ny tuberkuleza i Poldi, dia nilaza tamin'i Elizabeth, reniny, fa hiverina indray izy amin'ny maha-zazalahy azy, izay nataony tamin'i Wolfgang. Nilaza tamin'ny reniny ihany koa izy fa hiverina amin'ny toerany indray izy, mba ho akaikin'ny Hollzmullers.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy: Poldi, vehivavy iray, niorina indray tamin'i Wolfgang, tovolahy iray. Voamarikay fa miova ny fiovan'ny lahy sy ny vavy 10 isan-jaton'ny tranga indray vao teraka. Mety ho noho ny fanahy iray izay manana lahy na vavy lahy na vavy vavy. Mety hoe ny fanahin'i Poldi Wolfgang dia manana safidy malalaka ho an'ireo zaza vao teraka. Tadidio fa toa tsy liana tamin'ny lehilahy i Poldi. Ny toetra manintona amin'ny lehilahy dia toetra iray maneho vehivavy na fanahy amin'ny fanehoana firaisana ara-nofo. Nolazain'i Poldi tamin'i Elizabeth, reniny, fa hiverina amin'ny toerany indray izy amin'ny maha-zazalahy azy. Izany dia toa ny lahy sy vavy izay tiany indrindra.
Ny Fanahy izay mandray anjara amin'ny Fanahy Masina: Avy amin'ny tontolon'ny fanahy, ny fanahin'i Poldi dia toa nanolotra ny reniny, Elizabeth, fanambarana manonona izay manambara fa ho teraka an'i Marie Neurath. Tao amin'ny nofy, niseho Poldi toy ny vorona tamin'ny tady iray izay niresaka tamin'i Elizabeth ary avy eo dia nidina tany an-tranon'i Marie.
Ny fihenam-bidy: Teraka XMUMX 1,5 minitra taorian'ny nahafatesan'i Poldi i Wolfgang. Noho izany, velona i Poldi nandritra ny volana 2 voalohany tamin'ny fampivondronan'i Marie niaraka tamin'i Wolfgang. Raha misy fanahy iray tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny foetus, dia nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny foetus Wolfgang ho an'ny 6 ½ volana ny fanahin'i Poldi raha mbola velona kosa i Poldi. Amin'ny teny hafa, ny fanahin'i Poldi | Nipetraka tao amin'ny vatana roa i Wolfgang, indray mandeha, izay nofaritana ho fisarahana.
Nahita io tranga io ihany koa isika, ny fizarana ny fisarahana mifamatotra amin'ny foetus, amin'ny tranga hafa ao amin'ny vovoka Stevenson, ny an'ny Hanan Monsour | Suzanne Ghanem.
Fiovana amin'ny finoana: Ny fianakaviana Hollzmuller dia Katolika Romanina, ary na dia niahy ny amin'ny hahaterahana indray ao amin'ny vatana vaovao aza i Elizabeth sy Poldi, dia tsy izany no nataon'i Ernst Hollzmuller. Tamin'ny farany, niaiky i Elizabeth sy i Ernst fa i Poldi dia nanjary niova fo tahaka an'i Wolfgang ary noho izany, nanaiky izy ireo fa ny vovoka indray ao amin'ny vatana dia ny fomba fivoaran'ny fanahin'olombelona
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 102
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 102
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 102
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 103
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 103
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 103